दरवार हत्याकाण्डबारे प्रत्यक्षदर्शी तत्कालिन शाहज्यादा पारसले दिएको बयान | नेपालन्युज
शुक्रबार , २१ जेष्ठ , २०७८
२०५८ साल जेठ १९ गते राती राजदरवारमा विभत्स घटना भई तत्कालिन राजा वीरेन्द्र र रानी सहित राजपरिवारका १० जना सदस्यहरुको बिभत्स हत्या भएको थियो। उक्त घटनाबारे छानविन गर्न तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएका थिए।
सो समितिले घटनाका प्रत्यक्षदर्शीका साथै अन्य जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीसंग बयान लिएको थियो। त्यतिखेर समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालिन श्री ५ शाहज्यादा पारस वीर विक्रम शाहसंग गरेको प्रश्न तथा जवाफ प्रतिवेदनमा प्रकाशित शैलीमै प्रकाशित गरिएको छ।
समितिस् सरकार, राजदरवारमा भएको १९ गते जुन पारिवारिक जमघट थियो, त्यसमा सरकारको उपस्थिति छ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त भयो। त्यसबाट सरकारले के नजर गरिबक्स्यो, के अनुभव गरिबक्स्यो, त्यो सबै जानकारी भएको सुनेको कुराहरु चांही हामीलाई प्राप्त भएमा रिपोर्ट दिन सजिलो पर्ने थियो ?
२० वर्ष अघिको त्यो कालो दिन
जवाफः अब,हामी पुग्यौं त्यहाँ त्यस्तै अन्दाजी साँढे ७ भन्दा अलि ढिलो पुग्यौं। हामी त्यही ७ः४० तिर पुग्यौं, सबै जना आईसकेको थियो। मुमा,म,बहिनी, हिमानी र हामी अलि ढिलो पुग्यौं। ७।४० तिर पुग्दाखेरी अ… युवराजाधिराज अलिकति ककटेल ज्यूनार भैसक्या जस्तो थियो। अनि के खाने, मैले कोक मात्र खाने विचार गरें। ए कोक मात्र खाने, म त ह्विस्की खाएर बसेको छु हुकुम भयो। त्यो बेलासम्म ठिक्कै होईबक्सन्थ्यो, एकदमै लागेको जस्तो गरिबक्सी राखेकोथ्यो।अ…। कुरा गर्दाखेरी के भो भन्दाखेरी हैन यहि बिबाहको कुरा भैराखेको छ। मेरो, मुमासंग पनि कुरा गरें। आफूमुमासंग पनि कुरा गरें अनि, दुवै जनाले हुन्न भन्नु भयो। अब आईतवार बुबासंग कुरा गर्छु हुकुम भयो। त्यति कुरा भईराखेको थियो, त्यति हुँदा हुँदै आठ बज्यो। सबै जनालाई ड्रिङ्स सिंक्स टक्राईबकस्यो। आठ बज्यो आफूमुमा,मुमा बडामहारानी सवारी होईबक्स्यो, फेरि सरकारबाटै सवारी चलाईबक्सेका, फेरी…। ड्रिङ्क्स दिईबक्स्यो, अनि यस्तै साढे आठतिर महाराजाधिराज सवारी होईबक्स्यो। अफिस सक्याएर सवारी होईबक्स्यो, त्यो बेला दाई हामीसंग भित्र होईबक्सन्थ्यो। जहाँ घटना भयो त्यही कोठामा होईबक्सन्थ्यो। एकदमै लागेको जस्तो ढलिबक्स्यो, बेहोसै होईबक्सेको जस्तो सुकला नै भयो, त्यहीं भुईंमानै सुकला भयो, म, गोरख, निराजन र राजीव भएर उठाएर लगेर सरकार यहाँ त मिलेन ठूलो बुबा सवारी होईबक्स्यो,अब यसो यस्तो कति छ…। छ माथि सवारी चलाउँछौ भनेर हामी चार जना भएर त्यो माथि खोपीमा सवारी चलायौं, त्यो खोपीमा लगेर गद्दीमा त सुकला गराउन पाईन। गद्दीको मुन्तिर सानो ओछ्यान छ नि त्यंहीनै सुताएर गयौं हामीले।करीव साढे आठ, जस्तो भाथ्यो, साँढे आठ त्यस्तै ३१।३२ आठ ३१।३२ होला। हामी तल आयौं।बत्तिसत्ति निभाएर तल आयौं। तल आएपछि अब महाराजाधिराजको भित्रै, मुमा बडामहारानी सरकार जहाँ राज होईबक्सेको थियो त्यँहींनै हेलेन शाहसंग मिटिङ भई राखेको थियो। हामीले दर्शन गर्न पनि पाएको थिएन, बाहिर कुरेर बसि राखेको थिएँ, त्यहाँ भित्रको मिटिङ आधा घण्टा जति चल्यो होला, मेक्सिमम आधा घण्टा जति चल्यो होला। त्यसपछि हामी दर्शन गरेर यता आयौं। महाराजाधिराज सरकार र मुमा बडामहारानी सरकार पनि यतै सवारी भयो। त्यही कोठामा जहाँ यो घटना भयो, त्यही कोठामा सवारी भयो। भर्खर ड्रिङ्क्स लिई बक्सेको थियो, यसै बीचमा अब हामीचांही एकापट्टी कुनामा थियौं हजुर, देखिएन युवराजाधिराज सवारी भएको। अ……। हामीले युवराजाधिराज सवारी भएको देखेनौं, हामी कुनामा थियौं। मैले त यो ……………
समिति: कुना भनेको त्यो बडामहारानी सरकार राज भएको कुर्सीतिर कि ?
जवाफ: होईन क्यारेमबोर्ड छ नी।
समिति : क्यारेम बोर्ड यो ?
जवाफ : क्यारम बोर्ड, क्यारम बोर्ड छ नी।
हार्वर्डले सम्झियो वीरेन्द्र
समिति : त्यो बारको पछाडि ?
जवाफ : हो बारको पछाडि त्यो ……।। कुनामा हामी बस्ने कुना त्यही हो। अब त्यहाँ उताबाट चुरोट सुरोट समाएको नदेखियोस भनेर त्यो कुनामा हामी धेरै जस्तो बस्ने त्यही कुनामा हो। अनि त्यहाँ मैले सवारी भएको कोही देखेको थिईन,मैले सवारी भएको भनेको थाहा पाएको पहिलो बन्दुक पडकेपछि थाहा पाएँ। गड्याङ्ग गर्यो, त्यति ३ राउण्ड जति फायर भएको छ। पहिले सवारी हुने वित्तिकै ३ फायर भएको छ। एउटा माथि छ, एउटा सिधा छ। त्यसरी दागि बक्सदाखेरी एउटा सिधै गएको छ, एउटा माथि गएको छ। ३ राउण्ड जस्तो लाग्छ मलाई जहाँ सम्म लाग्छ। अव त्यस्तो हुँदाखेरि ३ राउण्ड जस्तो लाग्छ Frist मै त्यो पनि आवाज। महाराजाधिराजले के गरेको मात्र हुकुम भएको थियो ड्याङ्ग ड्याङ्ग एउटा यस्तोमा एउटा यस्तोमा । महाराजाधिराज ढलिबक्सियो। म र डाक्टर राजीव संगसंगै। दुईजना कुदेर गयौं। डाक्टर राजीव चाहीं महाराजाधिराज भएको ठाँउमा कुदन भ्यायो हजुर, मलाई चांही अधिराजकुमारी शोभाले जानै दिन बक्सेन, तिमी त्यहीं बस हिंडने होईन हुकुम भयो। त्यहींनै मैले पछाडि फर्केर बहिनीहरु सबै जनालाई ढल्नलाई सुत तिमीहरु यहाँ भने। यहाँ वाङ्ग वाङ्ग पडकन थालिसक्यो सबैजना सुत भनेर त्यो लाईन क्रोशियरमा सबै जनालाई राखें। उता दुई जना सिनियर मेम्बरहरु महेशकुमार र रवि शमशेर दुबै जना पनि मेरै छेउमा थियो। दुबै जनालाई पनि मैले लाईन क्रोशियरमा राखें। यत्तिमै यत्ति हुदै हुंदा हुंदै युवराजाधिराज सरकार, फेरी फर्केर सवारी भयो। मैले देखेको चाहीं हजुर, महाराजाधिराजलाई हानिबक्सेको देखें। धिरेन्द्र सरकारलाई हानी बक्सेको देखें। बाबा enough, you done enough damage भनेर second time फर्केर जाँदाखेरी, धिरेन्द्र सरकारले के हुकुम भयो भने you done damage हुकुम भयो। त्यति हुकुम हुँदा खेरी ड्याङ्ग ड्याङ्ग अर्को एउटा यस्तोमा लागेको छ। एउटा होकि दुईटा त्यो पनि धिरेन्द्र सरकारलाई राम्रो संग सम्झन सकेको छैन। ढलिबक्स्यो, ढलिबक्से वित्तिक्कै त त्यसपछि त अरु मान्छेहरु को को ढले राम्रो संग भन्न पनि सक्दिन। म पछाडि फर्केर बहिनीहरु सुताउन थाली सकेको थिएं, अं………।। मैले ढलिबक्सेको देखेको महाराजाधिराज ढलिबक्सेको देखें यता, कुमार खडग ढलिबक्सेको थियो, उता कुमार गोरख ढलेको देखें। त्यो चाहीं frist मै ठूलो बुबासँगसँगै ३ जना ढलेको छ। वाहिर सवारी भयो, फेरी फर्केर सवारी भयो, त्यो First Automatic Weapon MP-5 को फायरले ३ जना ढलेको छ। वाहिर सवारी भयो, फेरी फर्केर सवारी भयो, त्यसपछि त्यो सानो weapon MP-5 छ महाराजाधिराज सरकारले टिपिबक्स्यो। त्यो weapon टिपिबक्सेको थियो। अधिराजकुमारी शोभा सवारी भएर त्यो weapon लिईबक्स्यो, म्यागजिन पनि झिकिबक्स्यो। त्यहीं भंईमा राखिबक्स्यो त्यो। अब के भन्ठानि बक्स्यो भने त्यही एउटा मात्र होला भन्ठानि बक्सेछ। दाईले चाहीं अरु पनि बोकिबक्सेको मैले पनि देखेको हो। अरु ३ वटा बोकिबक्सेको थियो, ४ वटा थियो weapon एउटा चाहीं बन्दुक left side मा थियो hand gun.hand gun चाहीँ left side मा थियो। दाहिने बगलिमा MMP5थियो।भिरिबक्सेको shot gun र एम १६ त्यो Automatic हो। भ्यार्रर गरेर ठूलो बुबालाई हानिबक्स्यो, कान्छो बुवालाई पनि हानी बक्स्यो, यता खडग विक्रम ढालिबक्स्यो उता गोरख ढल्यो। त्यो first attact मै कताकता दागेर वाहिर सवारी भयो। त्यसपछि हामी त कुनैमा थियौं। बाहिरपट्टी के भयो मैले त देखिन फेरी भित्र सवारी भयो। सवारी भएर ठूलो बुबालाई……
समिति : समयको त्यस्तो कुनै ग्याप लामो ग्याप त हैनर ?
जवाफ : छैन, एक मिनेट पनि। छैन, ३० सेकेण्ड होला म्याक्सिमम, म्याक्सिमम भए ३० सेकेण्ड भित्र, भित्र बाहिर भित्र बाहिर गरिबक्स्यो।सवारी भयो ठूलो चाहीं बन्दुक एम १६ एम १६ ले पहिलेनै ठूलो बुबाको माथमा हानिबक्स्यो, सट त्यसपछि यता सवारी भयो, खडग फुपाजु ढलिबक्स्यो, कुमार खडग त्यो बारको ठ्याक्कै तल ढलिबक्स्यो।
…।। हजुर, उतापट्टी गोरख, ठूलो बुवा बीचमा स्नुकर बोर्डको तल गोरख ढलिरहेको थियो।…। श्रुति, त्यसपछि श्रुति मैले आं मएको देखिन, गोरखलाड्ढ गएर बाबा तिमीलाई पनि लाग्यो भनेको देखें । त्यो गएको बेलामा उताबाट फर्किबक्स्यो, युवराजाधिराज सवारी भयो, यतापट्टी ढली राखेको थियो हजुर, पहिले कुमार खडग ढलेकोमा अधिराजकुमारी शारदा सवारी भयो। तिमीलाई के भयो तिमीलाई के भयो भनेर सवारी भई माथि पट्टी सुतिबकस्यो। खडग फुपाज्यू माथि ढलेर कवर गरिबक्स्यो। युवराजाधिराज सवारी भयो ड्याङ्ग ड्याङ्ग ( point blank) ड्याङ्ग ड्याङ्ग ड्याङ्ग यस्तो घारीबाट देखेको त्यही देखेको। त्यो भएको म यता कुनाको मेचमा त्यो बारको मुनिबाट त्यो चाँही राम्रोसंग देखेको हो मैले। ड्याङ्ग हानी बक्स्यो। त्यो गोली आएर यतापट्टी कार्पेटमा लागेछ। भएर आएर मेचको यतापट्टी काठमा लागेर मेरो साईडमा महेशकुमारलाई राखेको थिएं मैले, त्यो गोली उछिट्टिएर गएर उसको यस्तोमा लागेको हो। त्यो चाहीं लागेको उसलाई। अब त्यसपछि फेरि बाहिर सवारी भएको हो कि म राम्रोसंग सम्झन सकिन, बाहिर सवारी भए जस्तो लाग्दछ, दुई तिन चोटी गरिबक्स्यो भित्र, बाहिर, सवारी हुँदा चाहीं यता अ।। शाहज्यादी जयन्ती दिदी, केतकी अ… श्रुति ३ जनालाई हानी बक्स्यो। श्रुति Third time…..।। अनि बाहिर सवारी भयो युवराजाधिराज सरकार चाहीं मैले त्यस पछि यता कुनामा सवारी भयो, त्यो अग्लो मेच जस्तो छ नि हजुर, त्यो कुनामा सवारी भयो, त्यसपछि मेरडाईरेक्ट नजरमा हामी पर्यौं…… के गरिबक्स्या हजुर…।। हामी ……।। के गरिबक्स्या please….. ।। गईस्योस भनेर त्यो बिन्ती जाहेर गरें मैले। नत्र भए सबै जनालाई हानेको भए म थिएं, महेश मेरो पछाडि थियो, रवि उतापट्टी ठ्याक्कै बारको मुनि रवि थियो।अ…।महेशको पछाडि मेरो बहिनी छ।पछाडि मेरो वाईफ थियो, मेरो वाईफ पछाडि मेरो ३ जना बहिनीहरु मैले राखेको थिएं। लुकाएर राखेको थिएं। एउटा बहिनी चाहीं त्यो सोफा जस्तो छ त्यसको पछाडि राखेको थिएं। एकदमै कभर गरेर राखेको थिएं मैले। मैले चाहीं दाईसंग के गरिबक्स्या हामी यस्तो यहाँ त हामी मात्र छौंउभिबकभ…। please…. One by one सबैलाई हेरेर छोडेर बाहिर लागिबक्स्यो, त्यसपछि थाहा भयो हामीलाई गोली हानी बक्सेन भनेर अ। म उठे गएं। त्यहाँ अरु मान्छे ढालिराखेको थियो। के के भा छ भनेर मैले कान्छा बुवाका गएं। पारस मेरो खुट्टा चलाउन मैले खुट्टै चलेन अ…। मेरा खुट्टा खुम्च्याउन सक्दिन खुट्टा चलाई देउ। अलि कति चलाएँ फिल गर्न सकिबक्सेन। त्यसपछि यता केटाकेटीलाई हेर भन्नु भयो, मैले त मेरो मुमा ढलेको पनि देखेको छैन। मुमा पनि देखखेको छैन, यता अधिराजकुमारी शान्ति पनि देखेको छैन, उता उता…।। बडा महारानी सरकार निराजनको त बाहिरै कुरा भयो मैले त्यति देखेको छैन। अनि त्यो बेलामा हेर्दा खेरी मुमा भर्खर उठि बक्सिराथ्यो, ढली बक्सेको। मुमा तल होईसिन्थ्यो। अधिराजकुमारी शान्ति माथि होईसिन्थ्यो। मुमाले चाहीं घचेटेर उठेको देखें। म help गरेर उठाँए मुमालाई। …।। म ठिक छैन म ठिक छैन भन्नु भयो, माथबाट पनि रगत आईरहेको यस्तो समातेर बसिबक्स्याथ्यो।माथको रगत चाहिने अधिराजकुमारी शान्तिको रगत रहेछ। मैले त माथमा लागेछ भन्ठानेको थिएं पहिला। अधिराजकुमारीको रगत रहेछ। त्यति गरेपछि कहाँ लागेको छ भन्दा यहाँ लागेको छ हुकुम भयो, माथ पनि चेक गरें मैले, केही पनि छैन। त्यसपछि म दौडेर गएर यता मुमा बडा महारानी सरकार कहा गएं। वाहिर पनि मैले त फायरिङ सुनेको थिएं। मैले त उता भन्ठानें, मुमा बडामहारानी सरकारको खोपीमा भन्ठानें। दौडेर त्यहाँ गए तहाँ त केही पनि भएको छैन। त्यहाँ यस्तो यस्तो भयो भनेर जाहेर गरें, त्यो बेलासम्म फायरिङ सकिसकेको थियो, म जाँदा मुमा बडामहारानी सरकार…।।
‘धीरेन्द्र भन्थे–आइ वान्ट टु डाइ फर माइ किङ’
समिति : मुमा बडामहारानी सरकार भनेको उता सानो बैठकमा……
जवाफ : उता सानो बैठक, बाहिर पट्टीको। त्यहाँ होईबक्सन्थ्यो। त्याहाँ जाँदासम्म Firing बन्द भएको थियो। जब म मान्छेहरुलाई हेर्न गएको थिएं त्यो बेलासम्म कोही फायरिङ्ग भई राखेको थियो। वाहिर…।।त्यो चौरमा फायरिङ्ग भई राखेको थियो। लास्ट भएकै चौरमा हो। त्यसमा पनि के भयो म भन्न सक्दिन। मैले देखेको होईन। कसलाई हानि बक्स्यो मलाई थाहा छैन। कसरी घटना भयो, त्यो पहिला कस्लाई हानिबक्स्यो, पछि कस्लाई हानि बक्स्यो त्यो मलाई थाहा छैन। मैले त मुमालाई लागेको देखेको पनि होईन, अहिले कुरा सुन्दाखेरी बाहिरबाट हानिबक्सेको मात्र सुनें। त्यो मलाई थाहा छैन मैले नदेखेको कुरा म भन्न सक्दिन। मैले देखेको कुरा यति हो। म पनि त्यसपछि मान्छेहरुलाई हेरें, सबैजना ढली राखेका छन। खुट्टा चलाई देउ भन्नु भयो। पाउ चलाएँ, सिधै हेर्न सकिंदैन यता केतकी फुपुलाई हेर भन्नु भयो, कान्छो बुवाले। म खुट्टा चलाउन सक्दिन म हेल्प भन्दा धेरै त्यो जाहेर गरें। दौडेर आफूमुमा कहाँ गएँ मुमाबडामहारानी सरकार काँ ३ जना होईबक्सन्थ्यो, त्यहाँ केही पनि भएको छैन। बाहिर दौडेर ए।डि।सी हरुलाई भित्र ल्याएं। त्यो एडिसीहरु बाहिर गयो, बाहिर जाँदा खेरी …… हरु ठ्याक्कै आईरहेको थियो। म बाहिर पुग्नु र एडिसीहरु आईपुग्न Almost सेम टाईम थियो। अनि त्याँहा बाहिर गएर के भने यो भित्र मरेको मान्छे पनि छ, घाईते मान्छेहरु पनि छ। मरेका मान्छेहरुलाई छाडदेउ। घाईते मान्छेहरुलाई दौडाई हाल पहिला, भित्र लागें घाईते मान्छेहरु सबैजना पहिला उठाएर one byone सबै जनालाई जो जो पहिला गए जो जो हार्न सकें पठाएथें, ५-६ मर्डरहरु थिए। जो जो आए हाल्दै पठाउँदै थिएँ। अब दाई,बडामहारानी सरकार र भाईलाई भेटाउन, गएको तिमीहरु खोज भनेर ३ जना। दाईको एडिसी दौडेर आयो he shot himself,he shot himself भन्दै आयो। त्यसपछि भाई कहाँ भन्दा भाईलाई पनि हानिबक्स्यो। ठुलो मुमा खोई, ठूलो मुमालाई पनि डाउन,सबैजना डाउन ठूलो मुमाको चान्सनै छैन भनेर उनिहरुले मलाई भन्यो। मैले देखेको होईन, ठुलो मुमाको चान्स छैन, दाई चांही एया एया गरेर लडिबक्स्याथ्यो, माथमा लागेको थियो। ल हाल भनेर दाई र भाईलाई चाहीं मैले सगैं हालेर दाईको एडिसीले हाल्यो, म अगाडि बसें, पछाडि एकजना ड्राईभरले दाईलाई समाईराथ्यो र भाईलाई समातेको थियो पछाडी अर्को एकजना थियो। दुई जना चाहीं म र दुईजना एडिसी अर्को एकजना ड्राईभर भएर अस्पताल पुर्याको। त्यतिबेला महाराजाधिराज सरकारको सवारी चलाई सकेको थियो।…। सबैभन्दा पहिला त सुन्दर भन्ने एडिसी छ, त्यो गर्दा उ आयो, उता उताबाट घुमेर आयो त्यहाँ त फायरिङ्ग भई राखेको थियो, उता ढोकाको सिसा फुटाएर मैले आउ भन्दिएं। यो फूटाएर भित्र आएर ठूलो बुबा महाराजाधिराज सरकारलाई लग्यो, महाराजाधिराज सरकारलाई पहिला लगेको हो। यो राजीव कहाँ थ्यो के थ्यो, राजीव गएको मैले देखेको होईन, सबैभन्दा पहिला चाँही महाराजाधिराज सरकारलाई लिएर गएको। त्यसपछि चाँही म गएर मान्छेहरुलाई हेर्न गएको। एडिसीहरुलाई मैलेनै बोलाएभएकोर त्यो शिशा ढोका फुटालेर महाराजाधराजको सवारी चलाएंर मैले देखेको त यत्ति नै हो।
समिति : सरकारले कति weapon use भएको देखिबक्स्यो र ?
जवाफस् मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा एम १६ यूज भएको छ। न्यिअप युज भएको छ। चारवटा युज भएको छ। मैले त्यो १२ दयचभ फायर गरेको देखेको छैन। त्यसको फायर देखेको होईन मैले। अरुचाहीं फायर भएको देखेको छु मैले। यो एम १६ फायर भएको देखेको हुँ।
समिति : युवराजाधिराजको कसरी ?
जवाफ : मैले सुने अनुसार दाईले आफूलाई हानिबक्स्यो, ब्रिजमा हानिबक्सेको।
जवाफ : यो बिबाहकै हो हजुर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ बिबाहकै हो। यो सुरू भएको पोहोर गएको जन्मोत्सवमा सुरु भएको कुरा हो। पार्टी भएपछि पार्टी भएको त्यही ठाँउमै त्यही ठाँउमै भएको कुरा हो। त्यंहीनै हामी आएर कुरा गर्दा खेरी जो जो against अघि जो जो with अब भाई र म with थियौं। अब राजिव त डा। with भयो, श्रुति, गोरखहरु र अरु बहिनीहरु against थियो बिबाहकोमा। मेन कुरा यही नै जस्तो लाग्दछ।
समिति : तर त्यो दिन त्यहाँ त्यो कुरा चल्योकि चलेन ?
जवाफ : म संग कुरा गरिबकस्या छैन। मैले अघि तपाईलाई भनेको जस्तो म जाने बित्तिक्कै के मर्जी भयो भने मलाई मुमासंग पनि कुरा गरें, आफू मुमासंग पनि कुरा गरें, नहुने भयो। अब म बुबासंग आईतवार दर्शन पाउँछु, त्यो बेला कुरा गर्छु त्यत्ति मात्र हुकुम भाथ्यो मलाई।
समिति : राम्रो मुड थियो ?
जवाफस् लागेको जस्तो भएको थियो। एकदमै राम्रो थियो मुढ। त्यस्तो होला भन्ने केही सोचेकै थिएनौं हामीलेत्याहा एकदमै जोक गरी बक्सेको जस्तो सबैलाई हँसाईबक्सेको थियो, त्यहाँ तल होईबक्सदासम्म त।
समिति : सरकार माथि कसले पुर्याएको ?
जवाफ : हजुर। हामी चारजनाले पुर्याएको। हामी चारजना,एकजनाले कहाँ सक्नु ।
समिति : बोकेरै लगिबक्स्यो ?
जवाफ : दुईजना साईडमा म पछाडि यसरी उचालेर गोरख र भाईले, अं राजीव र भाईले दुईजना साईडमा मैलै पछाडी माएर माथि लग्यौं। गोरख होईन, गोरख पछि पछि आउदै थियो। माथि…।
समिति : तल सुताईबक्स्यो ?
जवाफ : तल, मेन गद्दीमा त सुसताएनौं। तल सुतायौं। मैले भाईलाई भनेको वेपनहरु झिक लैजाउ, अपठ्यारो हुन्छ झिक…।पर्दैन होला…।।
समिति : त्याे कोठाबाट ?
जवाफ : कोठाबाट। माथिको कोठाबाट। जुन मेन गद्दी थियो त्यो गद्दी भन्दा तल अर्को एउटा बेड…। उ … ग्राउण्ड बर्ड जस्तो त्यहाँ सुताएर हामी तल आएको ।
समिति : वेपन्सहरु ?
जवाफ : वेपन्स अब त्यो, त्यस्तो त बोकिबक्सेको छैन। एमपी ५ र मैले देखेको छैन कहाँ थियो। अं…।अनि एम १६ चाहिनी त्यो तखताहरु छ नि, जाने बित्तिकै तखताहरु जस्तो छ।
समिति : त्यसमा कार्टेजहरु पनि निस्किराखेको थियो ?
जवाफ : हो,त्यो तखतामा छ। त्यो होला…।अं बट्टा भित्रै बक्स भित्रनै थियो। त्यो तखतामा नै देखेको थिएं मैले। त्यो चाहीं एम १६ चाहिनी।…… म पनि चिन्छु हजुर जहिले पनि चलाई बक्सेको हो। अब यस्तो हुन्छ भनेर कसले भन्न सक्ला र ?
समिति : अरु सरकारलाई सम्झिनु पर्ने त्यस्तो बाँकी ?
जवाफ : म अब सम्झे भनेदेखि, म त्यही सम्झन खोजिरहेको छु। त्यो यस्तो छिटो भैध्याथ्योकि सबै कुरा मैले गर्न सकेको काम गरेको हो। अब सक्ने जति गरेको हो। बचाउन खोजेको हो मान्छेलाई । त्यही पनि अरु पनि बचाउन सक्थेंकि जस्तो लाग्छ।आफूलाई अहिले सोच्दाखेरी। जे जति गरें त्यो कम भयो जस्तो लाग्छ आफूलाई।
ग्वार्कोमा एम्बुलेन्सलाई दियो बसले ठक्कर, १८ जना घाइते